Mpanamboatra sy mpamatsy COMPACTORS - Factory China COMPACTORS
BONOVO avo lenta avo lenta kokoa amin'ny fiarovana lozisialy lozisialy lovia famolavolana
Bonovo Plate Compactor dia ampiasaina hamehezana karazana tany sy vatokely ho an'ny tetik'asa fananganana izay mitaky fidirana ambanin'ny tany azo itobiana. ary ny antontan-taratasy. Izy io dia afaka miasa eo akaikin'ny fototra, manodidina ny sakana, ary eny amin'ny hantsana mideza na any amin'ny faritra mikitoantoana aza, na tsy mandeha ny horonantsary mahazatra na milina hafa na mampidi-doza ny fanandramana azy. Raha ny marina dia afaka mitazona ny halavan'ny boom-boalavo tanteraka amin'ny mpiasa ny mpamono takelaka Bonovo amin'ny fametahana na ny hetsika familiana, hiantohana ny mpiasa tsy lavitra ny loza ateraky ny lava-bato na ny fifandraisana amin'ny fitaovana.
BONOVO kodiarana fametahana fiainana lava be amin'ny habe rehetra
Ny kodiarana Bonovo Compaction dia manampy amin'ny fanomezana toky fa ny fametahana ny hady dia vita haingana kokoa ary mahomby kokoa noho ny milina fitsinjarana. Izy ireo dia afaka manao zavatra bebe kokoa amin'ny akanjo sy ny triatra kely amin'ny mpandraharaha sy ny masinina. Kodiarana fampidirana Bonovo dia natao hanatanterahana sy hatsangana haharitra.
BONOVO fivarotana mivantana fivarotana herinaratra azo ampitaina amin'ny kodiarana vy